Mishiinada gaarka ah | February 2020
Ka-shaqeeye baraf baraf ah: qalabka, naqshadeynta, wax soo saarka
Qalabka barafka-is-saaridda ayaa si aad ah loogu jecel yahay dadka xagaaga iyo dadka degan agagaaraha sanado badan. Mana aha wax la yaab leh, sababtoo ah milkiilaha kasta ee dacha ayaa wajahaya dhibaatada barafka ee xilliga jiilaalka. Dabcan, tan waxaa loo sameyn karaa gacanta, hubaysan leh majarafad, laakiin waxay qaadan doontaa waqti badan waxayna u baahan doontaa dadaal jidheed.
Sida loo doorto sharci-yaqaanada si ay u bixiso: noocyada sharci-yaqaanada, moodooyinka caanka ah, shuruudaha xulashada
Dalal badan oo horumarineed oo ka socda Dunida Dunida ayaa leh, tirada cawska caan ah waxaa loo aaneyn karaa oo kaliya kuwa si joogta ah u go'an 200 sano. Maalmahan, waa ay adag tahay in la rumaysto in milkiilaha milkiilaha uu ku qarash garoobayo waqtigan qiimaha leh. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah daryeel ku haboon, dusha sare iyo cawska cagaaran ayaa soo baxaya kaliya hal sano kaddib marka la furo.
Milkiilaha shidaalka oo dhan waa inuu awood u leeyahay inuu si madax bannaan u xoqo silsilad ee mashiinka. Dhamaanba, waxaa jira xaalado aan jirin meel ay ku sugaan caawimaad arrintan: wac master, ama u tag. Xaaladdan, waxaad u baahan doontaa talooyinkeena ku saabsan xoojinta silsiladda silsiladaha. Maxaa loo baahan yahay si loo xoqdo silsilad, sida loo fahmo in silsiladku ay noqdaan caajis Dammaanadda shaqada dheer ee sawirkaaga waa dayactir haboon.
Gantaal - Qalabka aan loo isticmaali karin ee geedi socodka qoryaha. Waxaa loo adeegsadaa si loo gooyo dogobka, geedo la gooyo iyo geedo. Qalabka degdega ah ee qaybta sawir ee qalabku wuxuu keenayaa gashan. Si aad u soo celiso qalabka si aad u shaqeyso, u baahan tahay inaad xoqdo silsiladaha. Qalabka ugu waxtar badan ee tani waa mashiinka looxiijyada shinbiraha.
Milkiilayaasha cawska iyo cagaarka leh ee isticmaala cawska cawska ayaa laga yaabaa inay ku dhibaan marka ay shaqaynayaan. Qodobkani waxa aanu kuu sheegi doonaa sida loo dayactiro qalabka cawska gaaska ee gacmahaaga, iyo sidoo kale waxaad baran doontaa sababaha caadiga ah ee burburka qalabkan. Qaababka qaab-dhismeedka cawska cawska ah badi caanaha ayaa lagu xakameynayaa adigoo riixaya gadaal, laakiin waxaa jira sidoo kale noocyo lagu xakameyn karo isticmaalka mashiinka istiraashka.
Waa maxay xaaqidda: qorshaha iyo ujeedada qalabka
Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro xaalado wanaagsan oo dhirta iyo ciidda. Dhulku waa inuu ku jiraa nafaqooyinka iyo oksijiinka. Si arrintan loo sameeyo, samee beerta adoo adeegsanaya xaansho. Maqaalka waxaan ku sheegi doonaa xajmiga iyo noocyada kala duwan ee loo isticmaalo inta badan. Qeexida aaladda Qaadku waa mashiinka beeraha ee loo isticmaalo dhul beerashada.
Iyadoo bilawga jiilaalka dhabta ah, si farxad leh carruurta, buuraha barafka ayaa ka muuqda jidadeena. Laakiin maaha dhammaan barafka jiilaalka ee farxadda. Gaar ahaan waxaa ka welwelsan arimaha qashin-saarista barafka iyo guryaha gaarka loo leeyahay. Qalabka noocan oo kale ah sida majaraha waa mid ku habboon, laakiin waxa aad u haboon in la isticmaalo hababka casriga ah.
Qalabaynta guriga iyo qalabka wax lagu kariyo ee loogu talagalay motoblock adiga ayaa sameeya
In beeraha, inta badan waa in aan wax ka qabanno caws, iyo kiiskan ma samayn karno iyada oo aan wax macmiil ah. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa nooca qalabka iyo sida loo sameeyo mashiinka mowing. Qaababka Naqshadeeysan Haddii aad tahay qofka leh guri guri ama guri xagaaga, markaa hubaal waxaad yeelan doontaa inaad la tacaalto caws, caws iyo geedo aan loo baahnayn.
Hawlaha ugu muhiimsan iyo astaamaha farsamo ee bulldozer T-170
Qodobkani, waxaynu baran doonaa qalabka dhismaha culus, oo loo qoondeeyay in loo yaqaan "classic" dhismaha iyo dhul-gacmeedka, halyeeyga warshadaha sayniska, oo ah bulldozer T-170. Tilmaanta iyo isbeddelidda qalabka warshadaha T-170 waa qalab dhisme iyo warshad sameeye, kaas oo loo abuuray hagaajinta tikidhada taxane T-130.
Shuruudaha lagu dooranayo cawska korontada korontada, sida loo doorto kaaliye bixiya
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay qalab caan ah oo ka mid ah dadka degaanka xagaaga iyo milkiilayaasha guryaha gaarka loo leeyahay sida cawska cawska. Qeybahoodu hadda waa mid aad u ballaaran, markaa waxaan nidaamsanahay oo aan isuduweynay dhammaan macluumaadka. Waxaan kuugu soo jeedineynaa faahfaahin ku saabsan xulashada cutubkan.
Xilliga beerku wuxuu bilaabmaa isagoo qodaya qodobka. Oo aan lahayn miisaanno yubilii ah iyo foornadoy ku filan inay shuqulkani dhammaystirmaan. Badanaa, ka shaqeynta goobta waxaa la socda xanuunka dhabarka iyo jimicsiga jirka oo aad u badan. Laakiin maanta, horumarkii ugu dambeeyay waxay yareeyaan hoos u dhigi kara culeyska shaqada iyo in la dedejiyo socodka shaqada. Iyo qalabka ugu muhiimsan ee ninkii beerta oo idil waa inuu leeyahay maadkii Mole. "
Gaadiidka yaryar ee qoysaska: sifooyinka farsamada "Uraltsa-220"
Minitractors ee nooca Uralets yihiin traktors yar oo soo saaray China iyo Russia. Qalabka noocan ah waxaa loo isticmaalaa degmooyinka iyo beeraha si loogu isticmaalo guriga iyo gaadiidka alaabta. Qeexida Tusaalaha Uralets-220 mini Tractor waa qaabka ugu da'da weyn ee xariiqa (waxaa sidoo kale jira Uralets-160 iyo Tarikets-180 mini Tractors).
Maxay MTZ 320 ku noqon kartaa beeraha?
Maanta, taraafikadu waa mid baahsan, iyada oo aan loo eegin xajmiga ama isticmaalka dalal kala duwan. Mid ka mid ah wakiilada ugu caansan waa mashiinka MTZ 320, taas oo ka mid ah mishiinnada mashiinka ah ee dhejiska ee nooca curyaanka. MTZ 320: sharaxaad gaaban oo "Belarus" waxay leedahay naqshad muraayad 4x4 waxana lagu daraa fasalka ciribtirka 0.6.
Doorashada korantada korantada
Cawska cawska iyo cawska fiican leh waa quruxda dabiiciga ah ee beerta iyo beerta. Gacan-siinta cawska oo si siman loola socdo, sidaas darteed horumar ayaa ka timaada samatabbixinta adigoo na siinaya qalab daryeel oo kala duwan. Waxa kaliya oo ay tahay in la go'aamiyo kuwa iyaga ka mid ah - inay doortaan cirroole, motokosa ama qalajiye.
Vladimir Tractor Plant: sharaxaad iyo sawir tareenka T-30
Iyadoo la raacayo marxaladda iyo xidhitaanka lama huraanka ah ee T-25-ka, hoggaanka shirkadda Vladimir Tractor Plant ayaa go'aansaday in la soo afjaro soo-saarista T-25 oo bilaabi doona marxal cusub oo soo saarista tayada T-30 oo aad u sarreeya. "Vladimirets" T-30 Tikidhada T-30 waa qalab faransiis ah oo loo isticmaalo, si ka duwan makiinadaha kale ee fasalka, mashiinka.
Iyada oo bilawga guga, beeralay kasta wuxuu si weyn u kordhiyaa xaddiga shaqada ee beeraha. Ciidda waa in la beeray, Bacriminta waa in la sameeyaa, iyo mid kale waa in la ilaawaa oo ku saabsan habka isku-dhex-dhexaadinta ee baradhada. Si loo fududeeyo hirgelinta mashruuc aad u farabadan oo ka shaqeeya garoonka mashiinka yar yar MTZ "Belarus-132n" - mashiinka qalabsan oo sameeya shaqo badan oo dhulka ah.
Sida loo doorto mishiinka mishiinka, raqiisna laguma kalsoonaan karo
Milkiilayaasha meella badani waxay inta badan fiiriyaan "mashiin yar yar." Farsamadani waxay kufiican tahay kiisaska marka kumbuyuutarka uu horayba u culus yahay, cagafkuna weli si wayn ayuu ugu jiraa goobta. Конечно, хочется, чтобы такие устройства охватывали множество видов работы. Узнаем побольше о том, как выбрать подходящий культиватор для большой по площади дачи.
Qof kasta oo ka shaqeynaya dhulkiisa wuxuu yaqaanaa sida ay u adag tahay in uu beerto baradho. Si loo fududeeyo geeddi-socodkan, aalad sida qorshe baradho ah ayaa la sameeyay. Qeexida iyo ujeeddada dhismaha Baradho baradho waa qalab yareynaya isticmaalka shaqaale adag ee jidhka beerashada baradho, sababtoo ah waa ku filan in lagu soo dhejiyo socodka, buuxiyo digriiga, iyo qalabka laftiguba wuxuu ku jajabi doonaa godadka, iyaga hoos u dhig oo ku rusheeyaa dhulka, waxaadna wadaa oo kaliya baabuurta is dulsaareysa Ha ilaawin inaad dib u buuxiso alaabta cuntada.